OpenBSD inowedzera chimwe chinyorwa chinyorwa | Linux Vakapindwa muropa
Vachave vatoziva OpenBSD, inoshanda system yemhuri yeBSD. Kana iwe usingazvizive, iyo yakavhurwa sosi Unix-senge sisitimu uye haina kubva paLinux kernel, zviripachena. Icho chizvarwa chinomuka kubva kuNetBSD, asi ichisiya kugona kune imwe nzvimbo yechipiri kuti itarise kuchengetedzwa senzvimbo yakasimba. Zvakanaka, nekuburitswa kweOpenBSD 6.2 kunouya kernel ine chinonakidza chiitiko.
Zvinoitika kuti OpenBSD 6.2 inogadzira yakasarudzika kernel nguva dzese mushandisi system paanotangazve kana kugadzirisa iyo system. Iri basa inonzi KARL (Kernel Kero Randomized Link) uye inoshanda nekudzokorora mukati memafaira enjere mune zvakarongeka kuitira kuti igadzire yakasarudzika bhanari blog nguva imwe neimwe. Ichi chitsva, nekuti izvo zvazvino vhezheni zveOpenBSD zvinoshandisa nzvimbo yakatsanangurwa, zvinoita kuti mafaera emukati abatanidzwe uye akatakurwa mubhinari imwechete nguva imwe neimwe uye nevashandisi vese.
Iko kuvandudzwa kwe Theo de Raadt ichashanda nekugadzira uyu mufananidzo chaiwo panguva yekumisikidza, panguva yekuvandudzwa kana bhuti nguva. Kana mushandisi bhutsu, achigadzirisa kana kudzoreredza muchina, iyo kernel ichangobva kugadzirwa inozotsiviwa nebhinari nyowani Uye zvese izvi zvechii? Eya, aya ndiwo marongero enzvimbo inoitirwa kero dzekurangarira uko iko kunoshandiswa uye kernel kodhi, pachinzvimbo chekuva nechinzvimbo chepamusoro kana zvikamu zvendangariro zvakatsanangurwa kare kuchinhu chimwe nechimwe, izvo zvinoomesa kushandiswa kwezviito zvinonongedzera kunzvimbo yekurangarira uye inovandudza kuchengeteka.
Pane imwe nzira yakafanana inonzi KASLR (Kernel Space Layout Randomization), iyo inosiyana neKARL mune kuti panzvimbo pekugadzira imwe bhanari nguva imwe neimwe, KASLR inotakura mabhinari akafanana munzvimbo dzisina kujairika, zvinova ndizvo zvinoshandisa masisitimu akadai seWindows neLinux-based parizvino. Ose maviri nechinangwa chimwe chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » OpenBSD inowedzera chimwe chinyorwa chinyorwa